कान दुख्ने कारण, यस्तो छ घरेलु उपचार !! | सुदुरपश्चिम खबर
कान दुख्ने कारण, यस्तो छ घरेलु उपचार !!
कान दुखाइ एक आम समस्या हो। दुखाई दुबै कानमा देखा पर्न सक्छ, तर यो प्राय जसो एउटा कानमा हुन्छ।कान दुखाई केहि समय वा लामो समयको लागि रहन सक्छ। यो पीडा हल्का र बढी पनि हुन सक्छ। कानमा संक्रमण बाहेक, कान दुखाइका अन्य कारणहरू पनि छन्। यहाँ त्यसका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
कान दुखाइका लक्षण ; कहिले काहिं कान दुखाइको कारणले गर्दा कानले राम्रोसँग सुन्दैन । केही व्यक्तिहरुका कानबाट तरल पदार्थ पनि आउँछ। कानको दुखाइका कारण आवाज स्पष्ट नसुन्ने, ज्वरो आउने, सुत्न समस्या हुने, कानमा तनाव, चिडचिडेपन, टाउको दुखाई र भोक नलाग्नु जस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
कान दुखाइका सामान्य कारणः चोट, संक्रमण, कानमा जलनको कारणले कान दुखाउन सक्छ। बङ्गारा वा दाँत दुख्नाले पनि कान दुख्न सक्छ । इन्फेक्सनको कारण कानभित्र दुख्छ । पौडी खेल्नु, हेडफोन, कटन वा औंला राख्नाले पनि कानको बाहिर इन्फेक्सन हुनसक्छ ।
कानभित्रको छाला जानु र पानी पस्नाले पनि कानमा ब्याक्टेरियाका कारण कानमा संक्रमण हुनसक्छ । कानमा जमेको तरल पदार्थले पनि ब्याक्टेरिया निम्त्याउँछ। लेबिरिंथाइटिसको कारण कान भित्र सुन्निन थाल्छ।
दुखाइका अन्य कारणहरू : हावाको चाप, कान फोहोर हुनु, घाँटी दुखाइ, रुघाखोकी, साइनस संक्रमण, शैम्पू वा पानी पस्नाले, कपास राख्नाले, टेम्पोरोमेन्डिबुलर संयुक्त सिन्ड्रोम, कान छेड्ने, दाँतमा संक्रमण कानमा एक्जिमा हुनाले पनि दुख्छ।
घरमा कसरी उपचार गर्ने ?सामान्य रुपमा कान दुखोमा घरमा पनि उपचार गर्न सकिन्छ। कान चिसो कपडाले सेक्नु र कान भिज्नबाट बचाउनाले पनि कानको दुखाई कम गर्न सकिन्छ ।
कानको दबाबबाट छुटकारा पाउनको लागि, सिधा बस्नुहोस् । चुइगम चपाउनाले पनि कानमा दबाव पर्छ । नवजात शिशुको कान दुख्छ भने उसलाई दूध पिलाउनुहोस् । यसले कानको दबाव कम हुन्छ ।
चिकित्सा उपचारः यदि तपाईंलाई कानमा तीव्र दुखाइको साथ ज्वरो आएको छ भने डाक्टरकहाँ सम्पर्क राख्नुहोस् । यसको लागि, डाक्टरले तपाईंलाई केही एन्टिबायोटिक र कानको थोपा दिन सक्छ। दुखाइ कम भएपछि पनि औषधि सेवन गर्न नछोड्नुहोस् । इन्फेक्सन पूर्ण रुपमा निको नभएसम्म औषधि प्रयोग गर्नुहोस् ।
यी चीजहरूलाई ध्यान दिनुहोस् : यदि तपाईंलाई बारम्बार कान दुख्छ भने केहि चीजहरूको विशेष ख्याल राख्नुहोस्। उदाहरणका लागि, चुरोट न पिउनुहोस्, कानमा कुनै पनि प्रकारको औजार नलगाउनुहोस्, नुहाइसकेपछि वा पौडी खेलेपछि कान सुकाउनहोस् । धूलो र एलर्जीबाट बच्नुहोस्।
धेरै मानिसमा कान दुख्ने समस्या हुन्छ । तर यसलाई हामी वेवास्ता गर्दछौ । हुनत कानको दुखाई आम समस्या हो ।खासगरी हवाई तथा सडक यात्राको क्रममा धेरैको कान दुख्ने गर्दछ । स–सना बाललिकामा कानको दुखाई बढि हुने गर्दछ ।
किन दुख्छ कान ? कान दुख्ने धेरै कारण हुनसक्छ । त्यसमा मुख्य कारणहरु निम्न छन्ः
१. कानमा इन्फेक्सन वा कुनै एलर्जी भयो भने कान दुख्ने गर्दछ ।
२. कानमा मैला जम्मा भयो भने पनि कान दुख्न सक्छ ।
३. कानभित्र पानी परेमा समेत कानको दुखाई हुनसक्छ ।
४. कानमा किरा पस्यो वा कुनै कुरा बिझ्यो भनेपनि कान दुख्ने गर्दछ ।
कान दुख्नुको अवाला अन्य विभिन्न रोगका कारणले पनि कानमा समस्या हुनसक्छ । कानको रोगको लक्षणमा कान कम सुन्नु, कान चिलाउनु, कान दुख्नु र कानमा भारिपन महसुश हुनु
मुख्य हुन् ।
कानको दुखाई वा संक्रमणबाट बच्न के गर्ने ?
१. सफा नीमको पातको रसको केही थोपा कानमा हालेमा इन्फेक्सनमा उपयोगी हुन्छ ।
२. दिनमा दुईदेखि तीन पटकसम्म तुलसीको पातको रस केही थोपा कानमा हालेमा कानको दुखाईका साथै इन्फेक्सन कम हुन्छ ।
३. सस्र्युको तेलमा लसुन मिसाएर तताउने ।
त्यसलाई चिसो भएपछि छानेर केही थोपा कानमा हालेमा कानको समस्यामा राहत दिन्छ । लसुनमा एन्टिवायोटिक एवं एन्टीसेप्टिक गुण हुन्छ, जसले इन्फेक्सन र दुखाई कम गर्छ ।४. जैतुनको तेलको केही थोपा कानमा राखेमा दुखाईमा रामबाणको काम गर्छ ।५. कानको दुखाई कम गर्न प्याजको रस प्रयोग पनि उत्तम हुन्छ ।र स्मरण रहोस् घरायशी उपचारका अलावा चिकित्सकको परामर्श सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । (gnewsnepal बाट सभार)
यस्ता छन् अनारका फाईदाहरु !!
मेथीदाना ग्याष्ट्रिकको अचुक औषधी ,यसरी प्रयोग गर्नुहोस !!